Julie's Oat 25 Strawberry 200g (3 Pcs) ~ ICT.com.mm
HomeJulie's Oat 25 Strawberry 200g (3 Pcs)
Julie's Oat 25 Strawberry 200g (3 Pcs)
Brand: Julie’s Item: Oat 25 Strawberry Contains cereals containing gluten, milk derivatives and soya derivatives. Processed inafacility that also processes peanut, sesame, tree nuts and nut products. Net Weight: 200g... [Learn more]
Item: Oat 25 Strawberry
မှတ်ချက်။ ။ Julie’s Oat 25 Strawberry 200g (၃) ထုပ် ပါ၀င်သည်။
OAT 25 Strawberry က စတော်ဘယ်ရီအနံ့အရသာသင်းသင်းလေးနဲ့ ကွတ်ကီးဖြစ်ပြီး စတော်ဘယ်ရီသီးအပိုင်းအစလေးတွေနဲ့ ဩစတြေးလျ အုတ်ဂျုံ ၂၅% ကို နှံ့စပ်အောင်ရောသမမွှေပြီး ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံပြီး အမျှင်ဓာတ်ရရှိစေတဲ့ အသီးအနှံလည်းပါဝင်တဲ့အတွက် Diet သမားတွေအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမှာပါ။ အခြားပါဝင်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ ကစီဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ကောက်ပံသီးနှံတွေ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပဲအခြေခံပစ္စည်းတွေ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Julie’s Oat 25 Strawberry 200g အထုပ် စုစုပေါင်း (၃) ထုပ် ပါဝင်ပါတယ်။